डेल मार्च आधिकारिक साइट
कसरी बुट बुप्स गर्ने?
तुंगरको निजी क्षेत्र - अतिथि हाउस सुस्त अफ गेस्टोको सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव
मनोरन्जनको खोजीको साथ, यदि गाउँमा बोरिंग भयो भने, त्यहाँ कुनै समस्या हुनेछैन। इभपोक्रेसिया, प्रसिद्ध जीवन-सुरक्षित गर्मिया, km0 किलोमिटर भन्दा कम। थप रूपमा, तपाईं टोपी तार्खांकटलमा यात्रा गर्न जान सक्नुहुन्छ, डोयुजलाभ र प्रायद्वीपको अन्य सुरम्च स्थानहरू।
अधिक प्रतिष्ठित एक गाउँको तूफान होटेल र होटेलहरू समुद्र नजिकै अवस्थित छ (-5- minutes मिनेट पैदल)। यदि तपाईं अलि बढी जानुहुन्छ वा यातायातमा ड्राइभ - कुनै समस्या छैन भने, तपाईं युएलमा पेन्सनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। गोरकी, अ pe ्गुर, लीन। अधिक अक्सर कोटी कोठा मानक र सूट प्रस्ताव गर्दछ।
आँधीबेहरीमा होटलहरू फेला पार्न गाह्रो छैन जुन परिवार जोडीहरूको छुट्टीमा केन्द्रित छ। तिनीहरूको विशिष्ट सुविधाहरू:
<< p> हाम्रो साइटमा तपाईं बिभिन्न आवास विकल्पहरू विचार गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नै लागि उत्तम छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। एक जो योजना बनाइएको को लागी सबैभन्दा आरामदायक र उपयुक्त हुनेछ।
अन्तर्क्रियात्मक नक्शा, हालको सम्पर्क जानकारी, फोटो, मूल्य, मूल्य र सेवाहरूको सूची - हामीसँग सबै आवश्यक विकल्पहरू छन्। कृपया नोट गर्नुहोस् कि चूवा मौसममा, होटेलहरू र होटेलहरूको लागि माग। हामी एक सीधा बिना एक कोठा को लागी एक कोठा बुक गर्न को लागी प्रस्ताव गर्दछ र एक प्रत्यक्ष कनेक्शन प्रयोग गर्न को लागी।
तपाईको सेवामा वयस्कहरूको एक विशाल पोखरी एक आधुनिक पानी शुद्धीकरण प्रणाली र बच्चाहरूको पोखरी नजिकै छ
सबै पाहुनाहरूको लागि हाम्रो होटल बुफे प्रणाली द्वारा आयोजित छ। स्वादिष्ट खाना - एक राम्रो आराम को एक अभिन्न अंग
यदि तपाइँ हाम्रो घरमा आउन निर्णय गर्नुहुन्छ भने, हामी खुशीका साथ सबै सर्तहरू प्रदान गर्दछौं ताकि तपाई आफ्नो कारको सुरक्षाको बारेमा चिन्ता लिनुहुन्न
हाम्रो अतिथि "हेडोन" पहिलो रेखामा आँधीबेसीको गाउँमा अवस्थित छ, किकसैले क्यालोओ "Supol" सिधा समुद्र तटमा जान्छ। सहमत, यो धेरै सुविधाजनक र रोमान्टिक छ - तपाईं समुद्र तटमा, समुद्रबाट2meters मिटर टाढा बस्नुहुन्छ!
सफा एयर फूड स्टोरी स्टोरीहरू र सिग्नन, एक अद्वितीय परिदृश्य, यो आँधीबेहरीको सम्पूर्ण क्षेत्र हो, जहाँ पाहुना "Assol" अवस्थित छ। हल्का मौसम। बालुवाको साथ फराकिलो समुद्री किनारले कभर गर्मी र सूर्यको किनारा हो।
Aseol एक सानो, निजी अतिथि घर - मात्र -0-600 मानिस हो। मालिक "गरो" को लागी एक व्यापार मात्र होइन - यो उनको जीवन हो। तसर्थ, प्रत्येक पर्यटकले उच्च तहमा लिन कोशिस गर्दैछ, पाहुनाहरूको सबै समस्या र आवश्यकताहरू प्रदान गर्दै। Serggey भ्लाडिस्भुजोनिच - पाहुना घर निर्देशक "हेडोलो" निर्देशक, सबै कुरा व्यक्तिगत रूपमा नियन्त्रण गर्दछ, जीवन को सबै sphears मा deples।